မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေကို တင်ဆောင်လာတဲ့ လှေတစ်စင်းကို တွေ့ရစဉ်
အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသတွင်းမှာ ပင်လယ်ပြင် ကို လှေတွေနဲ့ဖြတ်ပြီး နေရာရွှေ့ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားနေ ကြတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ အရေအတွက် များပြား လာနေ တဲ့ ပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ ဆွေးနွေးပွဲတွေ ကျင်းပကြဖို့၊ အဲဒီ ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ မြန်မာ ပါဝင်ဖို့ မလေး ရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အနီဖာအာမင် က မြန်မာ အစိုးရကို မနေ့က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
တကယ်လို့ မြန်မာ မပါဝင်ဘူးဆိုရင် ၊ လိုအပ်ချက်အရ အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ခေါ်ယူရပါလိမ့်မယ်၊ လှေစီး ဒုက္ခသည်ကိစ္စ နိုင်ငံတကာ အဆင့်အထိ မရောက် ခင်၊ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေ ပူးပေါင်းအဖြေရှာကြရာ မှာ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အတူပါဝင်နိုင် လိမ့်မယ်လို့ မလေးရှားက မျှော်လင့်နေပါတယ်လို့လည်း မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
အစောပိုင်းတုန်း ကတော့ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ထိုင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ လာမယ့် သီတင်းပတ် အတွင်း တွေ့ဆုံပြီး လှေစီးဒုက္ခသည် အကျပ်အတည်း ကို ဆွေးနွေး အဖြေရှာကြဖို့ မလေးရှားက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မနေ့ကတော့ မြန်မာပါ ပါဝင်ဖို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
လှေစီး ဒုက္ခသည်တွေပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေ မေလ ၂၉ ရက် နေ့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေး က အဲဒီ့ပွဲမှာ ဘာတွေ ဆွေးနွေးမယ် ဆိုတဲ့ အသေးစိတ် အစီအစဉ် ကို စောင့်နေကြောင်း၊ တကယ်လို့ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စ ပါလာမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာအနေနဲ့ တက်ရောက်မှာ မဟုတ်ကြောင်း သောကြာနေ့က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ခေါ်ဝေါ်နေသူတွေဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဒုက္ခသည်တွေသာဖြစ်တဲ့အတွက်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကသာ ကိုင်တွယ် စီမံရမယ့် ပြဿနာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။
ဒီအတွင်း အင်ဒိုနီးရှား နဲ့ မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ ဒီကနေ့ ဒုက္ခသည်ပြဿနာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ကြမယ်လို့ သိရပါတယ်။
လှေစီးပြေးဒုက္ခသည် နောက်ထပ် ၁၂၅ ဦးကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှထံ လွှဲပြောင်းပေး
ရခိုင်မှာကယ်တင်ထားတဲ့ လှေစီး ဒုက္ခသည်တွေထဲက နောက်ထပ် ၅ ဦးထွက်ပြေး
လှေစီးရွှေ့ပြောင်းသူ ငါးဦး၊ စခန်းက ထွက်ပြေး
လူကုန်ကူးမှုကျူးလွန်သူ ၂၀ ဦးကို မောင်တောတရားရုံး က ထောင် ၅နှစ်စီ ချမှတ်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှလှေစီးဒုက္ခသည် ၃၇ ဦးကို လွှဲပြောင်းပေး
လှေစီးဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာမူဝါဒ အမျိုးသားလွှတ်တော် အတည်ပြု
လှေစီးဒုက္ခသည် ၁၅၀ ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို လွှဲအပ်
how much history did you read , and which century rohingya ( banghali) lived in Burma? we did not see burma and world history. Most ethnic have in world history. do not create mouth history. we want to know about it.
Myanmar govt should try to make difference between real Rohingyas who had lived in the country for over many decades and the real illegal people from Bangladesh who had settled in Rakhine. It is foolish to keep on saying there were no Rohingyas befcre. Old newspapers and Myanmar Radio station could not deny 'No Rohingyas'
May 18, 2015 05:08 AM